Maxay Yihiin Noocyada Shabakada (Madoow, Qoto dheer, Oog, & Cad)? | Martech Zone
Sabtida, Janaayo 2, 2021 Jimce, Maarso 5, 2021 Douglas Karr
Inta badan kama wada hadalno amniga qadka ama kan Webka madow. In kasta oo shirkaduhu shaqo fiican ka qabteen nabadgelyadooda shabakadaha gudaha, ka shaqaynta guriga waxay u furtay ganacsiyada hanjabaado dheeri ah oo faragelin iyo jabsasho ah.
20% shirkaduhu waxay sheegeen inay la kulmeen khalkhal amni oo ka dhashay shaqaale fog.
Ku adkaysiga guriga: COVID-19 saamaynta ay ku leedahay amniga ganacsiga
Nabadgelyada internetka ma aha oo kaliya masuuliyadda CTO. Maaddaama kalsoonidu tahay lacagta ugu qiimaha badan ee shabakadda, waxaa muhiim ah in maamulayaasha suuqgeynta ay dhisaan wacyigelintooda halista iyo sidoo kale sida loo maareeyo arrimaha xiriirka dadweynaha ee la socon kara burburka. Sidoo kale, iyadoo kooxaha suuqgeyntu ay si fog ugala shaqeynayaan xogta macmiilka qaaliga ah… fursadda jabinta amniga ayaa si weyn kor ugu kacday.
Noocyada Webka Qoto Dheer
Internetka waxaa loo sifeeyay 3 gobol iyadoo lagu saleynayo sida macluumaadka loo heli karo:
Nadiifi Webka ama Shabakada oogada - gobolka Internet-ka ee inteena badani aqoon u leeyihiin, tani waa bogag internet oo si guud loo heli karo oo inta badan lagu qoro matoorada raadinta.
Wax kasta oo aan ka heli karno matoorada raadinta waxay ka kooban yihiin kaliya 4 ilaa 10% webka.
Websaydh qoto dheer - Shabakadda 'Deep Web' waa gobollada Internet-ka ee ka qarsoon dadweynaha laakiin aan loogu talagalin falal xun. E-maylkaaga, tusaale ahaan, waa Shabakadda 'Deep Web' (laguma soo bandhigin mashiinnada raadinta laakiin si buuxda ayaa loo heli karaa). Suuqgeynta suuqgeynta SaaS, tusaale ahaan, waxaa lagu dhisay webka qoto dheer. Waxay u baahan yihiin xaqiijin si ay uga dhex helaan xogta gudaha ku jirta. 96% internetka waa Web-ka qoto dheer.
Webka madow - gudaha Websaydh qoto dheer waa gobollo internetka ka mid ah oo si ula kac ah oo amni leh looga qariyo aragtida. Waa aag websaydhka ah oo aqoonsi la'aantu ay muhiim tahay sidaa darteed falal dambiyeedyada ayaa aad ugu badan. Xogta la jabiyay, falal dambiyeedyada sharci darrada ah, iyo warbaahinta sharci darrada ah ayaa laga heli karaa, iibsan karaa, laguna iibin karaa halkan. Waxaa horay u jiray warbixino ku saabsan Tallaallada COVID-19 ee lagu iibinayo Webka Madoow!
Websaydhka Mugdiga ah ayaa Lagu Sharaxay
Waxaa muhiim ah in la sheego in Webka Madoow uusan ahayn kaliya fal dambiyeed… sidoo kale wuxuu awood siiyaa dadka iyada oo aan la aqoonsan. Wadamada xaddidaya hadalka xorta ah ama si dhow ula socda isgaarsiinta muwaaddinkooda, Webka Madoow wuxuu noqon karaa albaabka ay ka galaan baaritaanka iyo helitaanka macluumaad aan dacaayad iyo adeegsi u lahayn dowladda. Facebook, tusaale ahaan, xitaa waxaa laga heli karaa Webka Madoow.
Kaliya tiro yar oo adeegsadayaasha adduunka ah (∼6.7%) ayay u badan tahay inay u adeegsadaan Shabakada Madoow ujeedooyin xun xun celcelis ahaan maalintii.
source: Dhibaatooyinka ka dhalan kara kooxda isku-xidhka magac la'aanta ee loo yaqaan 'Tor anonymity cluster' oo si aan isku mid ahayn uga dhaca dalalka xorta ah
Waddan xor ah oo leh hadal xur ah, ma ahan meel uu qofku u baahan yahay, in kastoo. Soddonkii sano ee aan ka shaqeynayey khadka tooska ah, weligey uma baahnin inaan booqdo Websaydhka Madowga ah waxayna u badan tahay inaan waligey booqan doonin.
Sidee Isticmaalayaashu Ku Gaadhaan Websaydhka Madoow
Helitaanka ugu badan ee Webka Madow waa iyada oo loo maro a Shabakada shabakada. Tor waa gaaban yahay Router basasha. Tor waa urur aan macaash doon ahayn oo baaraya oo soo saara aaladaha asturnaanta ee internetka. Tilmaamayaasha Tor-ka ayaa qarinaya waxqabadkaaga internetka oo xitaa waxaad u baahan kartaa xitaa in lagugu martiqaado inaad gasho degmooyin gaar ah .onion gudaha Shabakadda Dark.
Tan waxaa lagu dhammeeyaa iyadoo lagu duubo isgaarsiin kasta oo ku jira lakabyo badan oo sir ah oo lagu sii mariyo meelo badan. Isgaarsiinta Tor waxay ku bilaabataa si kadis ah mid ka mid ah noodhadhka gelitaanka dadweynaha, waxay ku faantaa taraafikada iyada oo loo marayo kala-sooc dhexe oo si aan kala sooc lahayn loo xushay, ugu dambayntiina lagu xalliyo codsigaaga iyo jawaabtaada iyada oo loo maro galka kama-dambaysta ah ee bixitaanka.
Xitaa waxaa jira goobo laga raadiyo kheyraadka xitaa Webka Madoow. Qaarkood xitaa waxaa laga heli karaa iyada oo loo maro qeybta biraawsarka caadiga ah… kuwa kalena waa tusmooyin qaab-Wiki ah oo ay soo ururiyeen dadka isticmaala. Qaarkood waxay u adeegsadaan AI inay aqoonsadaan oo ay ka saaraan macluumaadka sharci darrada ah… kuwa kalena waxay u furan yihiin inay wax walba tusaan.
Kormeerka Webka Madoow
Inta badan xogta dambiyada ee laga iibsado lagana iibiyo webka mugdiga ah waa xog jabis, daroogo, hub, iyo waxyaabo been abuur ah. Isticmaalayaasha waxay u adeegsadaan nidaamka 'crytpocurrency' inay ka dhigaan macaamil kasta oo lacageed mid baahsan lana qariyo sidoo kale.
Noocyadu ma doonayaan inay ka helaan xogtooda jebinta Webka Dark Dark waa riyo PR. Waxaa jira kormeerka webka madow xalalka halkaas loogu talagalay noocyada waxaadna u badan tahay in mar horeba ay kormeerayaan hay'ado kale macluumaadkaaga shaqsiyeed ee la helayo.
Xaqiiqdii, markii aan isticmaalay iPhone-kayga si aan ugu soo galo goobta oo aan keydiyo lambarkayga Keychain, Apple ii digay markii mid ka mid ah eraygayga sirta ah laga helay xadgudub… oo ay ku talinayso in la beddelo.
Ka dhig dhamaan softiweerkaaga mid casriyaysan, ma ahan kaliya barnaamijkaaga anti-virus-ka.
Adeegso furayaal sir ah oo badan - haku haysan hal erey oo keliya wax walba. Madal maareynta ereyga sirta ah sida Dashlane si fiican ayuu ugu shaqeeyaa tan.
Adeegso VPN - shabakadaha bilaa-waayirka ah ee dadweynaha iyo guryaha waxaa laga yaabaa inaysan sidaad u malayn ugu badbaado lahayn. Isticmaal Software VPN in la sameeyo xiriir isgaarsiineed oo sugan.
Ka hubi dhammaan dejimahaaga gaarka ah ee xisaabaadkaaga warbaahinta bulshada isla markaana awood u yeelo soo gal laba-qodob ama arrimo badan gal meel kasta oo aad kari karto.
Ma lihi hal xisaab oo muhiim ah oo aanan u baahnayn in aan marka hore galo eraygayga sirta ah ka dibna aan helo eraybixin labaad oo farriin loogu diro taleefankayga ama aan ka eego barnaamijka moobiilka moobilka. Taasi waxay ka dhigan tahay, in kasta oo hacker uu soo iibsan karo magacaaga iyo lambarkaaga sirta ah, waxay u leeyihiin inay marin u helaan aaladdaada moobaylka si aad uga soo ceshato ereyga gudbinta qoraalka ama barnaamijka xaqiijinta.
Ka raadi qufulka ama HTTPS daaqada biraawsarkaaga - gaar ahaan markaad wax ka iibsaneyso internetka. Taasi waxay daliil u tahay inaad leedahay xiriir aamin ah oo qarsoodi ah oo udhaxeeya biraawsarkaaga iyo halka aad booqanayso. Tan macnaheedu waa asal ahaan in qof ku dhex dhuunto taraafikadaada shabakadda uusan arki karin macluumaadka aad u gudbinayso gadaal iyo gadaal.
Ha furin ama ha kala soo dagin lifaaqyada cinwaanada emaylka ee aan lagaranayn.
Ha gujin wax xiriiriyeyaal ah gudahood farriimaha emaylka haddii aadan garanayn cidda soo dirtay.
Hubso in VPN-gaaga iyo gidaar-dhimmeedka la shaqeeyay.
Hayso xad u yeel kaarkaaga deynta ee macaamilada internetka.
Haddii aad meherad tahay oo lagugu wargeliyay jebinta xogta iyo macluumaadka laga helayo Webka Madoow, geeyo a Istaraatiijiyadda xiriirka dhibaatada PR isla markiiba, ogeysii macaamiishaada, kana caawi sidii loo yareyn lahaa khatar kasta oo shakhsi ah.
Bixinta: Waxaan u adeegsanayaa xiriiriyeyaal xiriir la leh adeegyada dibedda maqaalkan.
Tags: Garyaqaannada kaararka gawaaridaweb cadshabakad madowshabakad qoto dheerfurayaashaammaankadusha sareshabakada basashashabeelshabakadda torsugida laba-factorVPNsoftware vpnwaxawaa maxay web cadwaa maxay webka madowwaa maxay web qoto dheerwaa maxay webka dusha sare
Feb 10, 2021 markay ahayd 11:51 PM
Websaydhka madow runtii waa qayb khatar ah oo internetka ah